किन हुन्छ दाँत सिरिङ–सिरिङ ?::Online News Portal from State No. 4
किन हुन्छ दाँत सिरिङ–सिरिङ ?
–डा. सुनिता खनाल
हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो दाँतको बाहिरी भागलाई इनामेल भनिन्छ । इनामेलभन्दा भित्रको भाग डेन्टिन हो । सबैभन्दा भित्रको भागलाई पल्प भनिन्छ । विभिन्न कारणबस इनामेल खिइँदा डेन्टिन देखिन्छ र सिरिङ–सिरिङ हुन्छ । डेन्टिनमा रहने नशाहरु संवेदनशिल हुन्छन् । विभिन्न कारण इनामेल खिइन्छः गलत तरिकाले तथा धेरै बल लगाएर दाँत माझ्नाले इनामेल खिइन पुग्छ र डेन्टिन देखिन्छ । अनि दाँत सिरिङ–सिरिङ हुने समस्या आउँछ । एसिड भएको खानेकुराको सेवन, पेटको समस्याले जसले गर्दा अमिलो पानी आउँछ र इनामेल खियाउँछ । कसै–कसैको सुत्दाखेरि दाँत किट्ने बानी हुन्छ । यस्तो बानी नियमित गर्नाले इनामेल खिइन्छ । मुख सफा नराख्नाले गिजाको रोग जस्तै गिजा तल सर्ने भएर दाँतको जरा देखिन पुग्छ र सिरिङ–सिरिङको समस्या आउँछ । यदि नमिलेको दाँत छ भने पनि टोकाइ नमिलेर दाँत खिइन सक्छ ।
अन्य कारणहरुः दाँत कीराले खायो भने पनि सिरिङ–सिरिङ गर्ने समस्या आउँछ । पहिले भरेको दाँतको सिमेन्ट निस्कियो भनेपनि सिरिङ–सिरिङ हुन्छ । एकपटक भरेको दाँतमा फेरि कीराले खान सुरु ग¥यो भने पनि यो समस्या आउन सक्छ । कहिलेकाहीँ सिमेन्ट भरेपछि, ब्लिचिङ गरेपछि पनि दाँत सिरिङ–सिरिङ हुनसक्छ । तर त्यो केही समयपछि आफैँ सन्चो हुन्छ । कहिलेकाहीँ एसिडयुक्त मुख कुल्ला गर्ने औषधिको प्रयोगले पनि दाँत सिरिङ–सिरिङ हुने समस्या आउनसक्छ ।
सिरिङ–सिरिङबाट बच्ने उपायहरुः सही तरिकाले ब्रस गर्नुपर्छ । ब्रस कडा छभने नरम ब्रसको प्रयोग गर्नुपर्छ । एसिड भएको खानेकुरा सकेसम्म नखाने अथवा कम खाने, यदि सेवन गरेमा प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने बानी बसाउने । ग्यास्ट्रिकसम्बन्धी समस्याको उपचार गराउने । सुत्दाखेरि दाँत किट्ने बानी छभने दन्त चिकित्सकको तुरुन्तै परामर्श लिइहाल्ने र माउथगार्ड लगाउने । दिनको दुइपटक फ्लोराइडयुक्त मन्जनले दाँत माझ्ने बानी बसाउने, फ्लोराइड भएको माउथवास, फ्लस प्रयोग गर्ने र दाँत, गिजा स्वस्थ राख्ने । यदि खैनी, चुरोट सेवन गर्ने बानी छभने तुरुन्तै त्याग्ने । उपचारः यदि दाँत सिरिङ–सिरिङ हुने समस्या छभने तुरुन्तै दन्त चिकित्सककहाँ गएर कारण पत्ता लगाउनुपर्छ । कारणअनुसार उपचार फरक पर्छ । संवेदनशीलतामा प्रयोग गर्ने मन्जनहरु थुप्रै नाममा बजारमा उपलब्ध छन् जुन दुई हप्ताजति प्रयोग गरे सिरिङ–सिरिङको समस्या बिस्तारै कम भएर जान्छ । यदि गिजा धेरै तल सरेर दाँतको जरा देखिएर यस्तो समस्या आएको होभने सर्जरी पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसो गर्दा देखिएको दाँतको जरा छोपिन्छ र समस्या कम भएर जान्छ । दाँत किट्ने बानीले यो समस्या आएको होभने माउथगार्ड लगाउनु पर्छ । दाँत किराले खाएर यो समस्या आएको होभने तुरुन्त दन्त चिकित्सककहाँ गएर दाँत भरिहाल्नुपर्छ । यदि पहिले भरेको दाँतको सिमेन्ट निस्किएको छभने फेरि भर्नुपर्छ । सकेसम्म पेटको समस्याको उपचार छिट्टो गराइहाल्नुपर्छ । नमिलेको दाँतको अर्थोडोन्टिक उपचार गराउनुपर्छ, जसमा तारको सहायताले नमिलेको दाँत मिलाइन्छ र दाँत अझै खिइनबाट बचाउन सकिन्छ । माथि उल्लेखित उपचार गर्दा निको नभएमा रुट क्यानल उपचार गराउनु पर्ने हुन सक्छ । –स्वास्थ्यखबरबाट
महंगो गाडि नकिनौ : मन्त्री पंडित
उत्तरगंगा सहमतिमै बन्छः तिमिल्सिना